Tsipy kanetibe – «Mondiaux 2017» : tsy nisy namokatra ny ekipa malagasy | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mondiaux 2017» : tsy nisy namokatra ny ekipa malagasy
Ratsy ny vokatra ho an’i Madagasikara, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe, ho an’olon-droa sy olon-tokana. Tsy nisy nihoatra ny ampahefa-dalana mantsy ireo solontena malagasy.
Tsy nisy nihoatra ny ampahefa-dalana ny ekipa malagasy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe, ho an’olon-droa. Fihaonana, notanterahina tao Topsporthal Vlaanderen, any Gand, Belzika, ny 13 ka hatramin’ny 16 avrily lasa teo.
Raha ho an’ny “double mixte” iarahan’ny lahy sy vavy, nahitana an’i Jean sy i Tatie aloha, nihintsana tao anaty vondrona satria laharana faha-18 ary tsy nahazo afa-tsy fandresena roa. Marihina fa nandrombaka ny teo amin’io sokajy io i Tonizia, tamin’ny alalan’i Nadia Ben Abdessalem sy Khaled Lakhal. Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa 13 no ho 7, i Kambodza.
Ho an’ny olon-droa miaraka lehilahy kosa, nihintsana teo amin’ny ampahavalon-dalana i Jean sy Ram’s. Lavon’i Thaillande, nisy an’i Thanakorn Sangkaew sy i Sarawut Sriboonpeng, tamin’ny isa 13 no ho 5, ry zalahy. Ny Frantsay nisy an’i Henri Lacroix sy i Philippe Suchaud kosa ny nahazo ity sokajy ity rehefa nandresy an’i Thaillande, tamin’ny isa 13 no ho 10. Lavo teo amin’ny ampahefa-dalana i Tatie sy i Fafah ho an’ny olon-droa vehivavy. Nomontsanin’i Espaina, tamin’ny isa 13 no ho 1, izy mirahavavy. Lasan-dry zareo Thaillandais kosa ny tompondaka eran-tany, rehefa nanintsana an’i Belzika 1, tamin’ny isa 13 no ho 10, izy ireo. Nifarana teo amin’ny ampahefa-dalana kosa ny lalan-dRam’s, ho an’ny olon-tokana. Ilay Italianina, Diego Rizzi, ny nandresy azy, tamin’ny isa 13 no ho 9. Ilay Frantsay, Henri Lacroix, kosa no voahosotra ho tompondaka eran-tany.
Farany, ho an’ny olon-tokana vehivavy, resin’i Frantsa, teo amin’ny ampahavalon-dalana i Fafah. Tompondaka eran-tany, ho an’ity sokajy ity, ilay teratany kambodzianina, Sreymom Ouk, izay nandavo an’ilay Tonizianina, Mouna Beiji, tamin’ny isa 13 no ho 7.